Zọ iji gbaa ume nkuchi mmadụ nke Man Down Sistem (A10003) | Singapore Top Mini GPS Personal Tracker maka Autism / Autistic Kids & Dementia okenye
Zọ iji gbaa ume nkuchi nke Man Down System (A10003)
Ndị ọrụ naanị ha dịka ndị nweere onwe ha, ha chọrọ ịrụ ọrụ naanị ha, ha achọghịkwa onye ga-elekọta ha mana n'otu oge ahụ, ha chọkwara nchekwa na nchekwa iji chebe ndụ ha. Ndị ọrụ na-eguzogide mgbanwe, na-ewebata ma ọ bụ usoro iji hụ na nchekwa ha nwere ike ọ gaghị abụ nke nnabata. Yabụ, ọ bụ ihe ịma aka nye ọgbakọ iji bulie ojiji nke ọrụ onye ọrụ naanị ya. Maka nke mbụ, ha ga-ewepụ ihe mgbochi ọ bụla metụtara nsogbu onye ọrụ naanị ya na ha ga-eme ihe iji bulie ojiji nke ngwọta onye ọrụ naanị ya.
Ihe Ndị Na-emekarị:
ọ dịghị mkpa iburu ngwaọrụ: Ọtụtụ ndị ọrụ owu na-eche na ọ dịghị mkpa iburu ngwaọrụ, ọ ga-emebi oge na nlebara anya ha. Ha na-echekwa na ihe mere ndị ọzọ agaghị eme ha. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa maka ndị nchịkwa inye ha ihe ọmụma zuru oke na otu ọ ga - esi belata ihe egwu ọ bụla metụtara ndị ọrụ naanị ya.
Ndị na-arụ ọrụ Lon amaghị etu esi eji: Ngwọta onye ọrụ Lone nwere ọtụtụ njiri mara ya, ọ bụ ya mere o ji esiri ndị ọrụ owu ike ịghọta etu o si arụ ọrụ. Ya mere, otu ga-enye ntuziaka dị mma gbasara ngwaọrụ ndị ọrụ nsogbu nke ndị a naanị ha.
Egwu nke na eme ka mkpu bere na ndudue: Ọtụtụ ndị ọrụ naanị ha na-atụ ụjọ na obere mmejọ ha nwere ike ime ka mkpu rụọ ọrụ karịsịa na '' man down system '' ya mere ha ga-enwerịrị ike idozi mwube ngwaọrụ ma gbanyụọ anya mgbe ọrụ ya mehiere.
Esemokwu n’ọrụ ahụ: Ndị ọrụ na-eguzogide iji ngwaọrụ n'ihi na ha chere na ọ ga-akpasu ha iwe mgbe ha na-arụ ọrụ ha, ọ bụ ya mere nzukọ a kwesịrị iji teknụzụ ọhụụ dịka ihelp-man down system nke bụ ngwaọrụ ntanetị GPS kacha ntakịrị n'ụwa nke akọwara na ngalaba ikpeazụ nke isiokwu ahụ. Ewezuga ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịkọwa banyere mmekọrịta ụgwọ nhịahụ nke inwe ngwaọrụ ndị ahụ, nke pụtara na ọ bụrụ na ha ejighi ngwaọrụ ndị ahụ, ọ nwere ike ifu ndụ ha.
Nnyocha nke ngwaọrụ: Ngwọta ndị ọrụ na-enweghị onye na-arụ ọrụ nwere sistemụ GPS na ngwaọrụ nke mere ọtụtụ ndị ọrụ na-atụ egwu ịbụ ndị na-eso ụzọ na-abụghị ọrụ ahụ. Ya mere, ọ na-emepụta enweghị ntụkwasị obi maka ngwaọrụ.
Egwu mgbanwe: Ọ bụ ọdịdị mmadụ, anyị niile na-eguzogide mgbanwe mana agbanyeghị ozugbo ekwusara uru ndị a site na ịmara, anyị nwere ike ịgbaso mgbanwe ahụ. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ga-ekwurịrị okwu nke ọma ma nwaa ibelata egwu na ojiji nke agbanwe agbanwe metụtara ndị ọrụ naanị ya.
Nye ha akụkụ na-eme mkpebi:
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga etinye ego na osụhọ nke onye ọrụ naanị ya, yabụ ọ bụ nnukwu ohere ibinye ntinye nke ndị ọrụ owu na-ama. Vol sonye ha n’ime mkpebi mkpebi ga-eme ka mkpebi ha siri ike iji ngwaọrụ ndị a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweelarị usoro metụtara ndị ọrụ naanị ya, ị nwere ike jụọ ha ihe nwere ike igbochi ndị ọrụ owu na-eche, olee otu a ga-esi meziwanye usoro ndị a, yana ntinye ndị ọzọ metụtara mmelite nke sistemụ ahụ.
Ọzụzụ: Ihe ndozi nchekwa nke onye ọrụ na-abịa na ọtụtụ atụmatụ ọ bụ ya mere o ji dị mkpa maka nzukọ iji nyere ndị ọrụ aka ịma aka ịghọta ka ihe ndị a si arụ ọrụ. Site n'ime nke a, anyị nwere ike belata ọtụtụ ihe mgbochi nwere ike anyị kọwara n’elu.
Karọt na mkpisi nso: site na iji usoro ndị a ga-akwụ ndị na-eji ngwaọrụ nchekwa nchekwa ndị ọrụ aka n'ụzọ ziri ezi. N'aka nke ọzọ, ọ kwesịrị ịkụnye ntaramahụhụ n'ahụ ndị na-ejighị ya dịka nkuzi. Thisme nzukọ a na-eme ka ndị na-eme nke ọma nwee ume ma n'otu oge ahụ na-akụda ndị na-emegide iwu nke nzukọ.
Nleta onye oru g’eme n solution oru ihe o na-abu-Man-system:
Nwere ike nnapụta ihe banyere onye ọrụ naanị ya site na iji otu ngwaọrụ nke na-ewetara gị usoro zuru oke metụtara ihe ọghọm nke onye ọrụ. Ee, usoro ihelp-man down nke bụ ntinye 3G GPS kacha nta n'ụwa. Ọ dị mfe iburu ndị ọrụ owu na-agaghị ewe iwe mgbe ha na-ebu ya n'oge ọrụ, n'otu oge ahụ ọ na-arụ ọrụ enyi na enyi na-adị mfe nghọta site na ndị ọrụ naanị ya. O nwere otu bọtịnụ na ngwaọrụ ahụ, onye ọrụ naanị ya nwere ike pịa mgbe ọ bụ ihe ọ bụla dị ize ndụ nke ga-eziga nzukọ na ọnọdụ ahụ. Ya ịtụnanya super ezi ọdịda sensọ ga-eziga ozi na nzukọ mgbe nanị ọrụ ada site na ebe ya mere na ọ nwere ike ịchekwa ndụ nke onye ọrụ site n'oge enyemaka. Ewezuga nke ahụ, o nwere usoro nkwukọrịta olu abụọ ga-arụ ọrụ nke ga-eme ka nzukọ ahụ na-eso ndị na-arụ ọrụ naanị nọrọ.
Na mmechi, ka iwelie ojiji nke ndi oru ihe nlebara anya bu ndi n’enwe agha aghaghi imebi ihe mgbochi a wee buru ndi ntinye nke ndi oru ha, kuziere ha, jiri karọt na nnabata iji hu na ojiji nke ngwaọrụ nchekwa. Ndi otu kwesiri iji ihe eji eme ihe dika ihelp ka ha mara ihe banyere otu onye oru di n by oru site na iji otu ngwaọrụ nke gunyere uzo niile.
Nzuzo 2536 11 Echiche Taa
Man Down System site na Mmeputa (A10005)